Ahoana ny fametrahana macOS Sierra 10.12 amin'ny rangotra, tsikelikely | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana an'i Sierra amin'ny rangotra
Tianao hametraka Sierra avy hatrany? Izahay dia mijery ny rafitra fiasan'ny Apple vaovao ho an'ny Mac ary raha vantany vao ampidinintsika amin'ny solo-sainay izany, ny soso-kevitray dia ny mametraka avy hatrany am-boalohany mba hamafana ireo rindranasa voafafa, lesoka na zavatra hafa mety hanimba ilay zavatra niainana tamin'ny andiany vaovao rafitra.
Ny marina dia ity karazana fanavaozana manan-danja ity dia soso-kevitra hanao azy ireo hatrany am-boalohany na dia tsy ilaina aza izany, izany hoe Raha tsy te-hametraka macOS Sierra eo am-boalohany ianao dia sintomy fotsiny avy amin'ny Mac App Store ary kitiho ny installer. Talohan'izay dia manoro hevitra anao koa izahay mba hanao backup raha sendra misy tsy mety, saingy amin'ny ankapobeny dia tsy misy miafina noho izany. Avy eo raha mamaky an'io ianao dia satria te hametraka macOS Sierra avy hatrany am-boalohany amin'ny Mac-nao ianao, noho izany Andao hojerentsika ny dingana hanaovana azy amin'ny USB Bootable.
Ampahatsiahivo aloha ireo mpampiasa rehetra izay te-hanavao ny Mac avy amin'ny rangotra fa misy izy ireo fomba maro feno marina hanatanterahana fametrahana madio fa ny ampiasaintsika foana dia Fitaovana DiskMaker izay azo sintonina mivantana avy amin'ny tranonkala ofisialy ary avelanay eto aminao ny rohy. Raha ny marina dia fomba iray hanaovana bootable USB sy hahafahana mametraka ny rafitra fiasa vaovao hatrany am-boalohany ary tena mandaitra ho antsika izy io ka averinay foana. Ny fizotrany dia tena mitovy amin'ny tranga taloha fa ho hitantsika ny tsikelikely mba hamafana ny zava-drehetra hatrany am-piandohana.
Ny antsipiriany iray manan-danja amin'ireo tranga ireo dia ny fametrahana hatramin'ny voalohany na raha hanao fanavaozana mivantana ny rafitra eo amin'ny rafitra ankehitriny aza isika, dia ny fanaovana ny dingana rehetra miaraka amin'ny MacBook mifandray amin'ny router amin'ny alàlan'ny tariby ary miaraka amin'ny tamba-jotra elektrika hialana amin'ny olana mety hitranga na amin'ny fampidinana na amin'ny fanavaozana.
3 Mametraka macOS Sierra 10.12
4 Data manan-danja
Ny zavatra voalohany ary raha te handroso asa isika raha ny macOS Sierra 10.12 vaovao alaina ao amin'ny Mac antsika, dia ny fanatanterahana ny endrika Karatra USB na SD 8GB na avo kokoa ilaintsika amin'ny fametrahana madio ny rafitra fiasa ka ampifandraisintsika amin'ny port USB an'ny Mac ary manomboka. Tsotra ny fizotrany ary mila miditra fotsiny isika Fitaovana kapila izay ao amin'ny Folder an'ny hafa ao anatin'ny Launchpad. Rehefa tafiditra ao anatiny mifidy ny USB / SD izahay ary tsindrio mamafa manampy izahay el Endrika: Mac OS Plus (Journaled) ary apetrakay amin'ny macOS Sierra mivantana ny anarana tadiavinay. Hofoanana tanteraka ny karatra USB na SD ampiasaina amin'ity dingana ity, koa mitandrema amin'ny angona ananantsika ao alohan'ny hanatanterahana ny fizotrany.
Raha vantany vao vonona ny USB / SD antsika, ny fitaovana DiskMaker dia vonona hanao ny kapila bootable sy ny macOS Sierra misintona amin'ny Mac, dia afaka manomboka ny fizotrany isika. Miaraka amin'ny USB / SD mifandray amin'ny Mac tsindrio ny kisary DiskMaker momba ny safidy an'ny mametraka OS X El Capitan (heverinay fa hiseho tsy ho ela i macOS Sierra) mety tsara miaraka amin'ny macOS Sierra ary tsindrio ny fampidinana macOS Sierra teo aloha izay ho ao anaty fampirimana ho installer.
Ankehitriny dia mangataka aminay ny tenimiafin'ny mpitantana izy ka apetrakay ary tsindrio ny manohy. Tonga izao ny fotoana hiandrasana ny fizotran'ny fametrahana amin'ny USB / SD 8GB raha somary mangina kely dia normal. Na ahoana na ahoana dia hanakatona ny programa isika, hanapaka ny USB / SD amin'ny Mac na hamono ny solosaina. Vantany vao vita isika dia afaka manomboka ny macOS Sierra dingana fametrahana madio amin'ny milina.
DiskMaker Nohavaozina izy io hanohanana ny macOS Sierra. Fa raha tsy mety aminao, misy mpampiasa izay nanatanteraka ny dingana avy amin'ny Fitaovana DiskCreator. Ity fitaovana farany ity dia mitovy amin'ny DiskMaker ampiasaina hamoronana USB.
Mety maharitra fotoana maharitra ny fizotrany, ka mahareta amin'izany. Raha manana lesoka ianao amin'ny farany dia aza manahy fa izany dia satria tsy tena vonona ho an'ny macOS Sierra ilay fitaovana Ankehitriny dia tsy miova ny fitaovana ary mandeha tsara ny fizotrany. Ho an'ity dia afaka mijery ny USB / SD isika ary raha miseho ao anatiny ny installer dia tsindrio ny fahazoana mombamomba azy (cmd + i) ary tsy maintsy hibodo habaka 4,78 GB izy io. Raha izany no izy dia nandeha tsara ny fizotrany.
Mametraka macOS Sierra 10.12
Raha vantany vao vita ny dingan'ny DiskMaker miaraka amin'ny USB / SD dia afaka miroso amin'ny zavatra tena mahaliana antsika isika, izay ny fametrahana rafitra amin'ny Mac. Mba hanombohana ny fizotrany dia tsotra toy ny famonoana Mac mifandray amin'ny USB / SD ary amin'ny fotoana hanombohana fotsiny tazoninay ny lakilen'ny Alt Mba hiseho ny menio fanombohana dia mifidy ny fahatsiarovana USB na karatra SD misy ny mpiorina macOS Sierra izahay ary izay no izy.
Anjarantsika izao fafao ny OS X El Capitan an'ny Mac antsika ary ho azy Misafidy ny safidy Disk Utility izahay ary mamafa ny fizarazaranay amin'ny OS X ankehitriny izay mamela azy el Endrika: Mac OS Plus (Journaled). Mivoaka ny Disk Utility izahay ary manohy amin'ny fametrahana macOS Sierra. Raha vantany vao vita ny fizotrany dia afaka mankafy ny kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa isika amin'ny fametrahana madio tanteraka.
Hanoro hevitra ny fametrahana fanavaozana hatrany izahay amin'ny solosaina, na Mac, iPhone, Apple Watch, Apple Tv, sns. ary ny antony lehibe indrindra dia ny fiarovana izay atolotry ny fanavaozana ho antsika ary koa ny vaovao.
Adidy ve ny fametrahana madio na vaovao? tsia, tsia, fa isaky ny mitsambikimbikina avy amin'ny rafitra fiasa iray mankany amin'ny iray hafa isika dia mahaliana ny manadio ny Mac ary noho izany, inona no tsara kokoa noho ny mametraka avy eo am-boalohany. Etsy ankilany, raha afaka misoroka ny fametrahana ny backup an'ny Mac isika, dia tsara kokoa, efa fantatsika fa somary sarotra ny mametraka tsirairay ny programa sy ny hafa, saingy tsy maintsy mieritreritra isika fa indray mandeha monja a taona ary ny Mac sy ny traikefan'ny mpampiasa dia hankasitraka izany.
Efa nilaza aho fa misy fomba maro hanatanterahana fametrahana madio na avy amin'ny macOS Sierra amin'ny Mac, saingy tiako manokana ity noho ny fahamendrehany isan-taona ary satria manana ny installer mandritra ny taona aho sao misy olana na tsy fahombiazana amin'ny Mac. Tsy fitakiana ilaina amin'ny fanavaozana ny Mac amin'ny voloMiankina amin'ny olona tsirairay izany, ka amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny Mac App Store, fipihana eo amin'ny fisintomana ary avy eo havaozina, dia hanana ny rafitra fiasa vaovao napetraka ao amin'ny Mac antsika koa isika.
Ankafizo macOS Sierra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fametrahana an'i Sierra amin'ny rangotra
86 hevitra, avelao ny anao
Francis Pena dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako misintona azy amin'ny pc
Valiny tamin'i Francis Peña
Misaotra betsaka tamin'ity fampahalalana manan-danja ity, satria tiako ny manavao ny 0.
Yasmina Macías Pérez dia hoy izy:
Manana partition aho (heveriko fa antsoina toy izany) miaraka amin'i Windows .. manao ny fametrahana arak'izay lazain'izy ireo fa ho very azy io aho?
Valiny tamin'i Yasmina Macías Pérez
N steal Casas hahaha mitsikilo ahy ianao !! Na izany na tsy izany, azoko antoka fa raha mividy azy ianao dia ho avy ary raha tsy ... miankina amin'ny toerana hametrahan'izy ireo azy any izany, satria tao amin'ny solosaina akondro no nanoloran'izy ireo ahy hitondra azy ireo tamin'ny fanavaozana farany
Raha mametraka avy hatrany am-boalohany ianao dia hahavery ireo fizara noforonina fa afaka mamerina mamorona azy ireo avy eo. Eritrereto fa ny fametrahana avy am-boalohany dia midika fa hamafana izay rehetra anananao ao amin'ny Mac anao (miaraka amin'ny backup hatrany am-pelatanana) ary ao anatin'izany ny fizarazarana, data ary ny hafa.
enric bertomeu dia hoy izy:
Jordi Heveriko fa tsy miombon-kevitra aminao aho, raha apetrakao avy amin'ny 0 dia ny fizarazaran'izay alehan'ny OS ihany no apetrakao, dia mijanona ho simba ilay partition hafa
Mamaly an'i enric bertomeu
Mahitsy ianao dia afaka mamolavola ny fizarazarana macOS, saingy azo atao izany fa rehefa mamolavola kapila iray manontolo ny ankamaroan'ny mpampiasa dia olana izy ireo avy eo. Mazava ho azy, ny soso-kevitro dia ny hamela ny Masinina Time fotsiny ary amin'ny tranga mety indrindra hamerenana kapila ivelany hanadio ny kapila alehan'ny OS fa tsy hanana olana. Amin'ity fomba ity dia voafafa tanteraka ny kapila ary rehefa azo atao ny misoroka olana mandritra ny taona.
Misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao Enric
Mamelà ahy hiditra amin'ny resakao fa heloka ny fametrahana serizy amin'ny mac. Ny hevitro eee
Jose Fco Cast hahaha Mampiasa ny kapiteny isan'andro aho fa ho an'ny tanjona fandinihana dia tsy maintsy nitady ny fiainako aho mba hahafahako mampiasa ireo programa mitovy amin'ny any an-dakilasy ary tsy afaka manao afa-tsy amin'ny Windows aho, ary misaotra an'Andriamanitra fa omen'i Apple io safidy io (asaivo miasa roa napetraka ny rafitra)
FidelWare dia hoy izy:
Misaotra, tsara izany, raha vantany vao manomboka ny fametrahana avy amin'ny rangotra ianao, ahoana no hahitako ireo rindranasa sy angona izay mahaliana ahy avy amin'ny backup?
Valiny amin'i FidelWare
Salama FidelWare, avy amin'ny Mac App Store ireo fampiharana miaraka amin'ny Time Machine azonao atao ny mahazo ny angona ilainao.
Tsy afaka noforonina ny kapila noho ny lesoka: Nisy lesoka nitranga: -10006. Nahita hadisoana i Finder: tsy afaka mametraka disk "Install OS X El Capitan" ho "DMX_Workdisk".
Efa nanandrana azy indroa aho, nefa tsy nahomby.
nohazavaina tao amin'ilay lahatsoratra. Ara-dalàna io lesoka io satria tsy manohana macOS Sierra ilay fitaovana amin'ny voalohany, fa noforonina ny installer.
Hugo Diaz dia hoy izy:
Miaraka amin'ny DiskMaker X, tsy afaka ianao, miseho eo amin'ny farany ity -_-
Valiny tamin'i Hugo Diaz
Ny lesoka dia natsipy satria lazainay fa El Capitan izy io ary macOS Sierra izy io saingy miasa mitovy ihany ilay namana azo entina.
mervin16 dia hoy izy:
ASObjC Runner.app manontany ahy
Mamaly an'i mervin16
Hitako izany tao amin'ny faq diskmaker:
Mihaona hatrany amin'ny lesoka ASObjC Runner aho (Error -43. Tsy hita ny ASObjC Runner)!
Ity dia somary sarotra. Bibikely izay sendra sendra ny Lion DiskMaker ary tsy manana fanazavana tena izy, afa-tsy lesoka coding sasany.
Ny hany fomba hitako nanala ny olana dia ny:
Mampiasà Monitor Monitor (in / Applicationsl / Utilities) hialana amin'ny ohatra ASObjC Runner;
Atsaharo ny Mac-nao;
Zahao indray raha toa ka mbola mihazakazaka ao amin'ny Monitor Monitor ho an'ny ASObjC Runner;
Avy eo alefaso indray ny Lion DiskMaker ary manandrana manangana ny kapilao.
Indraindray koa dia mety hanampy ny fampiasana session hafa madio sy hafa.
Raha manana fahitana amin'ity olana ity ianao dia mifandraisa amiko.
Manantena aho fa hanampy anao izany
sebno dia hoy izy:
Mahazo lesoka aho rehefa mifarana ... haha ​​lainga! Lahatsoratra tena tsara! Misaotra anao!
Mamaly an'i sapno
Mitranga amiko hatrany izany fa heveriko fa satria manana ny beta an'ny macOS sierra napetraka aho.
Misaotra betsaka amin'ny fanampiana.
Hafahafa tokoa ... tsy tokony ho olana ny fametrahana ny macOS Sierra beta,
Lazao anay raha mahita vahaolana ho an'ny mpiara-miasa hafa ianao.
hahaha, ianao dia ho ...
nacho moreno dia hoy izy:
Tsy nahavita nanao sonia sonia ny karama fametrahana, misy fanampiana ve ?????
Mamaly an'i nacho moreno
Miguel de la Fuente (@miguelfcaba) dia hoy izy:
Izy io dia manome ahy ny lesoka mitovy amin'izany, novonoiko izy ary tsy nisy napetraka. Tokony hamerina amin'ny laoniny avy amin'ny Time Machine aho.
Mamaly an'i Miguel de la Fuente (@miguelfcaba)
Salama, ny fitaovana DiskMaker dia nohavaozina manolotra fanampiana ho an'ny macOS Sierra ary tokony tsy ho olana intsony izany. Ao amin'ny lahatsoratra dia efa voahitsy koa.
Cesar Augustus dia hoy izy:
Satria ny Mac-nao tsy mifanaraka amin'ny ora sy ny ora dia ataovy izao.
1º Mivoaha amin'ny efijery fametrahana lehibe, mankanesa any amin'ny utilities, ary sokafy ny terminal.
Raha manana fifandraisana wifi ianao, mifandraisa,
2ºy satria ao amin'ny tambajotra ianao dia manorata ao amin'ny terminal.
"Daty" Tsy misy teny nalaina mazava ho azy!.
Hiseho ny ora sy ny daty ,,,
3º Mba hanavaozana anao amin'ny fotoana mety avy amin'ny mpizara paoma dia soraty ity baiko manaraka ity.
ntpdate -u time.apple.com ary mamely ny Fiverenana.
Mamaly an'i CesarAugusto
txsantos dia hoy izy:
Misaotra anao CesarAugusto. tonga lafatra ny vahaolana….
Tafandria mandry. Ny partition Macintosh HD ihany ve no esoriko sa azoko esorina ny kapila manontolo tsy misy olana?
eo ny mpampiasa tsirairay dia afaka manao araka izay itiavany azy, manoro hevitra aho ny famongorana kapila tanteraka (raha mbola manana kopian'ny Time Machine azo antoka amin'ny kapila hafa ianao) fa azonao atao fotsiny ny mamafa ny fizarazaran'ny rafitra miasa ary mametraka eo.
resand91 dia hoy izy:
Salama, nataoko tamin'ny programa roa sy efa havaozina ary tsy mitsahatra mandiso ilay hadisoana iray ihany, maninona aho no mamaha azy? Efa lany ny fanarenana ary tsy afaka mametraka na inona na inona aho 🙁
Valiny amin'ny resand91
Matoky foana aho fa diso, fa aorian'ny fametrahana madio dia tokony hampidirina indray ny zava-drehetra noho ny fanampian'ny Time Machine, fantatro izao fa tsy tokony ho toy izany, fa ny mieritreritra ny hametraka ny mozika rehetra amin'ny disk fotsiny dia tsy mahatonga ahy. te-hanavao. Tena tokony ho toy izao ve?
Nataoko ny dingan'ny famoronana pendrive amin'ny Disk Maker, taorian'ny fametrahana minitra 7 min dia nisy lesoka niseho: »Tsy afaka nanao ny fanamarinana sonia ny karama fametrahana» »manome safidy fotsiny ny hanaiky sy hiverina amin'ny vidin'ny installer indray, namorona ny pendrive indray aho namerina namerina ary toa mitovy tanteraka izany ... azafady mba ampio.
Salama Jordi, manatanteraka ny dingana rehetra nolazainao teo aho ary araka ny hevitrao dia diso aho. Rehefa azoko ny mombamomba azy (cmd + i) dia mitazona ahy 4,6 Gb izy fa tsy ilay 4,78 GB izay tondroinao.
Tokony hieritreritra aho fa ny mpanamboatra tsy kopia tsara tsia
Valiny tamin'i Ismael
Nataoko tamina kapila mateza io misy fizarazarana 3, dia ny: DMG PROGRAMS, TIME MACHINES ary OSX INSTALLER. Nampiasako ny programa hametrahana macOS ao amin'ny fizarazaran'ilay kapila azo esorina ary inona no nahagaga ahy… Ny programa dia namafa ny kapila mangarahara iray manontolo ary nanondro ny fizarazarana… Soa ihany aho fa nanao dika mitovy amin'ireo programa alohan'ny ...
Valiny tamin'i David G.
Dareg dia hoy izy:
Salama, ataoko amin'ny kinova vaovao an'ny Diskmaker X 6 izay efa manohana ny macOS Sierra ary manome fahadisoana amiko izany. Iray amin'izany ny:
Nisy lesoka: -10006. Nahita hadisoana ny finder: ny disk "Install macOS Sierra" dia tsy azo apetraka amin'ny "DMX_Workdisk"
Mamaly an'i Dareg
Ho an'ireo rehetra manome anao lesoka, andramo hiditra indray Diskmaker ary hamorona ny installer miaraka amin'ny kinova vaovao
http://diskmakerx.com Manavao ilay lahatsoratra izahay. Izaho manokana dia nametraka azy omaly alina ary tsy nisy olana fa miaraka amin'ny diskmaker nohavaozina tsara kokoa.
Miaraka amin'ny kinova vaovao no ahitako lesoka.
Salama daholo. Vao avy nisintona ny kinova farany an'ny diskmaker 1 ora lasa izay aho ary mandefa ahy hatrany ilay lesoka mitovy amin'ilay nolazain'izy ireo hoe "DMX_Workdisk". Izaho dia efa nizaha / Boky ary tsy misy dikanteny hafa, iray ihany ho an'ny Mac OS sierra. Efa mamorona ny usb indray, ary avereno indray ary tsy misy. Nisy zavatra niasa taminao?
kevy dia hoy izy:
Manome hatrany ny lesoka -10006 farafaharatsiny amiko.
Mamaly an'i kevy
Salama maraina, ahoana no hahitako ny fizotry ny fandikana ny macOS Sierra ho fahatsiarovana?
Salama maraina, adiny firy no vao apetraky ny macOS Sierra ho fahatsiarovana?
Helena Lopez dia hoy izy:
Manome ahy ny lesoka amin'ny: "Tsy afaka nanamarina ny sonian'ny sonian'ny mpampiditra"
Nahavita ny zava-drehetra tamin'ny DiskMaker vaovao aho saingy manome ahy ny hadisoana mitovy foana isaky ny: S
Omeo vahaolana aho azafady !!!
Misaotra mialoha Jordi
Valiny amin'i Helena Lopez
Luis Carlos dia hoy izy:
Manana fanontaniana amin'ny macOSSierra aho, mamela anao hametraka rindranasa ivelan'ny App Store ve ianao? Izaho koa dia manana pendrive izay miseho ho toy ny tabilao fizarazaran-tari-komana ary tsy afaka mamafa izany aho. Tsy manome ahy ny safidy hamoronana fizarazarana sy ny mpitari-dalana. Tsy tonga amiko io pendrive io. Ahoana no hamelako azy ho orinasa?
Valiny tamin'i Luis Carlos
Nataoko ny fametrahana ilay diskmaker vaovao ary nanome ahy hadisoana aho, nanandrana namerina tamin'ny laoniny ny Time Machine aho ary nanome ahy hadisoana izany. Ankehitriny dia manandrana miverina amin'ny maodelin'ny orinasa aho (cmd + R). Ho hitantsika ny famoronana …… izay ivoahany.
Tsy nandeha ny DiskMaker, nampiasa ny Install Disk Creator aho ary niasa 100%.
Misaotra betsaka tamin'ilay mpitari-dalana.
Misaotra ny fandraisan'anjaran'i Ricardo dia hojerentsika ireo fampianarana ho avy! Na izany na tsy izany dia miasa tsara ho ahy ny DiskMaker ahy.
Misaotra Richard! Tsy fantatro izany ary tsy misy olana izany ary vonona ny hametraka amin'ny 0.
tsara, nanandrana nametraka azy avy tao amin'ny mac aho ary nahazo ny tsy fetezana mitovy "tsy afaka nanamarina ny sonian'ny sonian'ny payloader installer", ary tsy nisy mihitsy.
efa misy manana ny vahaolana
misy fomba hametrahana azy amin'ny mac faramparan'ny taona 2008?
Mitandrema fa tsy hiara-miasa amin'ny OS Sierra ilay programa "DiskMaker". Na dia heverina ho mifanentana aza izy io dia tsy miroso amin'ny fitehirizana ny fampahalalana fa avelany eo antsasaky ny (nitranga tamiko izany). Nijaly aho, mandra-pahitako ilay programa hafa voalaza ato amin'ity lahatsoratra «DiskCreator» ary faly aho izao .. haha ​​😀
Tsara ny tolakandro, te-hisintona mivantana avy amin'ny fivarotana app aho, mba hanavaozana azy ho azy, saingy mahazo lesoka aho izay milaza fa “tsy mampiasa ny tabilao fisarahana fisarahana GUID ity disk ity, ary tsy hitako izay hatao. Manana anao x ny kapiteny aho ary mety amiko izany, inona no tokony hataoko? misaotra
Noforoniko tamin'ny DiskCreator ity azoko ity hafatra ity: «Tsy azo notanterahina ny fizahana sonia karama fametrahana».
Efa nofafaiko ny fizarako fanarenana ary tsy afaka mamerina na inona na inona intsony aho, azoko an-tserasera ihany ny safidy fanarenana saingy tsy mety amiko izany, tsy hitako izay hatao intsony, mila mitondra azy fotsiny aho amin'ny fanohanana magazay! 🙁
Traven dia hoy izy:
Raha ny marina dia tsy hitako izay tombony azo amin'ny fametrahana azy amin'ny rangotra. Na ilay noforonina tamin'ity pejy ity aza dia milaza hoe "... isaky ny mitsambikina avy amin'ny rafitra fiasa iray mankany amin'ny iray hafa isika dia mahaliana ny manadio ny Mac", noho izany tsy ilaina ny hidiran-doza. Niezaka nanokatra fampiharana iray sy iray hafa aho ary mandeha tsara daholo ny zava-drehetra. Na dia "novidina" tao amin'ny App Store aza ianao dia tsy nipoitra ny Sierra na dia efa nampidininao aza izany.
Fa maninona no manasarotra ny fiainana?
Valiny tamin'i Traven
Javierote dia hoy izy:
Andao hojerena raha misy afaka manampy ahy satria tsy fantatro intsony izay ataony ...
Manana macbook pro 13 retina aho nanomboka tamin'ny 2013, izay 100% no mifanaraka amin'ny fotokevitra. Mazava ho azy fa backup ary toy izany ...
Manana fametrahana (fanavaozana) roa an'i Sierra aho ary amin'ny roa, raha vao tafapetraka dia mivaingana ao anaty bara fanoratana eo am-piandohana. Amin'izao fotoana izao dia manao ny fanarenana backup faharoa aho. Fa tsy sahy manao fametrahana fahatelo aho satria matahotra fa tsy hisy hiova.
Nandalo ny Clean My Mac, ny Onyx, antivirus marobe aho, amin'ny ankapobeny madio avokoa. Kapila mafy 100gb ...
Tsy haiko raha sahy mametraka aho satria azoko antoka fa very programa vitsivitsy aho ...
Nisy olona nitranga ve? Misy olona afaka manampy ahy ve?
Mamaly an'i Javierote
Bruno pasetti dia hoy izy:
Rehefa vonoiko ilay macbook dia manomboka aho dia tsindrio Alt. Mivoaka ny boot disk fa tsy miseho ilay usb miaraka amin'i sierra. Tsy haiko ny mamoaka azy. Inona no tsy mety ataoko?
Valiny tamin'i Bruno Pasetti
Luis G dia hoy izy:
Mbola manana olana mitovy amin'izany ihany aho, efa nanandrana ny fitaovana rehetra voalaza etsy ambony mba hahatonga ny MacOS sierra ho azo entina, mandefa ny lesoka "ny fanamarinana ny sonian'ny karama fametrahana dia tsy afaka notanterahina" Nisy nahita vahaolana ve izany?
Valiny tamin'i Luis G
egarcia2c dia hoy izy:
Salama, izaho manana an'io olana io ihany. Rehefa tapitra ny fametrahana MacOs Sierra amin'ny usb bootable, azoko ny lesoka "tsy afaka nanao ny fanamarinana sonia ny karama mpampiditra" aho ary mamoaka ahy amin'ny fametrahana. Misy mahay manamboatra azy ve?
Mamaly an'i egarcia2c
Avelantsika ny vahaolana amin'ny olana "miaraka amin'ny sonian'ny karama ..." https://www.soydemac.com/solucion-la-problema-la-instalacion-macos-sierra-no-se-ha-podido-realizar-la-comprobacion-firma-la-carga-util-del-instalador/
arahaba ary lazao anay
Ed rdz dia hoy izy:
Jordi Misaotra anao noho ny fanampianao. Lazaiko aminao fa manana ny olana aho "miaraka amin'ny sonia ny karama" na izany aza ny vahaolana aseho eto dia tsy ho ahy, satria ny daty sy ny daty ankehitriny dia marina. Misy sosokevitra ve?
Mamaly an'i Ed Rdz
Salama Ed Rdz, na dia milamina aza ny fotoana, ovao tanana izy. Mety hamaha ny olana izany, ny mijery fotsiny raha tsy maninona dia tsy ampy. Ataovy manual ao amin'ny Terminal izany.
Etsy ankilany, raha milaza aminao izany dia manandrama manavao mivantana tsy misy backup na amin'ny fanombohana amin'ny Internet. Nanova ny kapila Mac ve ianao? Inona no Mac anananao?
Tsara ny tolakandro, rehefa manandrana mametraka azy aho dia diso ny filazako fa efa nametraka 10.2 aho, saingy napetraka ny kapiteny. Misy vahaolana ve?
nanana kinova beta napetraka ao amin'ny Mac-nao ve ianao? Hafahafa ny hevitrao satria ny andiany Sierra dia 10.12
ivan flores dia hoy izy:
Salama, tsara ny andro, nanao ny fizotrany aho fa rehefa mametraka ianao ary milaza ny tsipika fandrosoana hoe "0 segondra sisa" dia mijanona eo io, ary tsy mandroso intsony na manao na inona na inona, nataoko indray mandeha ary niandry nandritra ny 8 ora aho, avy eo nataoko indray ny fizotrany ary maharitra adiny 3 hatramin'ny nisehoan'izany ary tsy nisy. Inona no azoko atao? Manana macbookpro 2011 aho
Mamaly an'i ivan Flores
MDG dia hoy izy:
Rehefa manandrana manao usb azo alefa ny DiskMaker dia manipy ahy izao hafatra manaraka izao: «Ny famafana ny drive '/ Volume / USB' ..» dia tsy mahatakatra ny hafatra
Mitranga amin'ny olona iray ve izany zavatra izany? Misy vahaolana ve?
Mamaly an'i mdg
Salama, nahita vahaolana ve ianao? Toy izany koa no mahazo antsika !!!
Salama Carla, eny, taorian'ny fahatongavana sy fandehanana maro dia afaka namaha azy aho. Nanandrana in'arivony niaraka tamin'ny DiskMaker X aho ary nandiso ahy foana izany .. Vahaolana: DiskCreator !! 🙂 Homeko anao ny rohy fampidinana ary lazao ahy ny fandehany. https://macdaddy.io/install-disk-creator/
mijanona ao amin'ny bara logo tsy misy na inona na inona izy io, avy eo dia maty sy mitohy hatrany hatrany hatrany. Inona ny hgfo?
Roky dia hoy izy:
Manana an'io olana io ihany aho, rehefa manamarina izany hatramin'ny 4.2 gb ary tsy miseho amin'ny kapila bootiko rehefa manandrana mamerina ny milina aho ... MAcintoch sy Recovery ihany no azoko ..
Mamaly an'i Roky
Chema_Han dia hoy izy:
Manana Imac roa aho, ny iray tamin'ny 2009 ary ny iray hafa tamin'ny 2011, azoko atao ve ny mampiasa usb mitovy amin'ny fametrahana an'i Sierra, ho an'ny fametrahana madio isaky ny Imac?
Mamaly an'i Chema_Han
annabelleguittard dia hoy izy:
Salama, manana MAC 2013 aho izay efa nametraka kinova ary rehefa nanavao ny kinova Sierra aho dia tsy afaka niditra tao amin'ny rafitra fiasa ary niteraka ity hafatra ity "ny volume dia misy mac os na os x fametrahana izay mety ho simba".
Ny mampiahiahy ahy, fantatro fa tsy nahy sy tsy matoky tena loatra amin'ny MAC aho dia tsy nanao backup mihitsy.
Tsy haiko raha azo sintonina amin'ny USB (amin'ny solosaina hafa) ny IOS Sierra ary apetraka avy eo, nefa tsy very ny angona.
Mamaly an'i annabelleguittard
Salama te-hiova sierra fa manana Leopard aho ary ny solosaiko dia avy amin'ny 2010.
Ho vitako ve ny hametraka azy mivantana avy amin'ny magazay Appel sa mila mametraka ilay programa lazainao aloha aho mba hahafahako manapaka ilay tsofa?
Niezaka nametraka sary renivohitra tao Leopard nandritra ny roa andro aho ary tsy avelako hametraka izany amin'ny kapila ara-batana ananako ao anatin'ny Mac-ko.
Namaky tao amin'ny forum aho fa tsy afaka mametraka ny sierra raha toa ka nametraka ny Leopard teo aloha. Marina izany?
Ilay tranga somary voafikitra sy very hevitra amin'ny fitsapana aho.
Inona no torohevitrao amiko?
Tsy azoko ny tianao resahina ao amin'ilay faritra nametrahana ny usb, mila mampifandray usb amin'ny mac ve aho?.
Misaotra anao mialoha aho; Miarahaba.
Oram-panala dia hoy izy:
Salama, nametraka ny kapiteny aho avy eo ary nandalo mac os sierra ary tsy nataoko tamin'ny voalohany ary ny maac dia tamin'ny faran'ny taona 2009
Valiny ho an'i N steal
Amin'ny ampahany iza no napetraka ny MacOS Sierra "teo aloha", izay heverina fa ao anaty rindranasa ????
Geordano dia hoy izy:
Salama, vao navaozina ho mac os sierra aho, ary rehefa miverina mac aho dia banga ny sarin'ny efijery fidirana ary tsy misy sary hafa, inona no hataoko?
Valiny tamin'i Geordano
Andres Mendoza dia hoy izy:
Salama daholo, aorian'ny fanaovana izay rehetra ataon'ny MacBookPro hatramin'ny 2011 dia tsy manaiky ny karatra SD na PENDRIVE aorian'ny nanaovana zavatra be dia be tamin'ny Diskmaker x 7 na i Diskcreator aza. Fa manandrana manao fametrahana madio aho aorian'ny fametrahana an'i Sierra.
Tsy haiko raha izany no antony rehefa manandrana misafidy ireo boot drive aho, na ny karatra SD na ny Pendrive dia tsy hita fotsiny, fa ny Hard Drive napetrak'ilay solosaina findainy ihany.
Mety misy manome ahy vahaolana ve hahitako raha toa ka afaka mametaka madio indray mandeha aho?
Te hanao an'io fametrahana madio io aho satria manana olana amin'ny mpanjifa Mail sy mailaka hafa. Rehefa tapitra ny fotoana misokatra dia voahidy mafy izy ireo.
Manantena valiny avy any aminao.
Valiny tamin'i Andres Mendoza
satria azoko ity hafatra ity amin'ny mac «erasing drive '/ volume / USB' ...» tsy azoko ny hafatra «event sysonotf»
Maicol Callero sary placeholder dia hoy izy:
ary aiza no ahazoako ny installer macOS Sierra?
Valiny tamin'i Maicol Callero
Quifar dia hoy izy:
Manana olana aho manandrana mametraka azy.
Ataoko daholo ny dingana rehetra, fa rehefa vonoiko ny solosaina dia averiko indray (miaraka amin'ny USB vonona hapetraka) ary tsindrio ALT rehefa mitranga ny feo fanombohana dia tsy eken'ny mac ny USB ho kapila boot. Ny kapila boot mahazatra an'ny solosaina ihany no hitako. Inona no mety ho vokatr'izany? Misy vahaolana ve?
Mamaly an'i Quifar
Yorch dia hoy izy:
Salama Toy izany koa no nitranga tamiko. Elaela aho vao nitady ny vahaolana. Raha mijery ny USB ianao (izay ahitanao ny MacOS dia ahitanao ny sary famantarana Sierra sy ny fampirimana antsoina hoe "Utilities" rehefa manokatra azy ianao, dia mahatsapa ianao fa manana famantarana "famerana" ireo rindranasa ireo ary tsy azonao atao ny manokatra azy ireo. Zava-dehibe tokoa ireo , satria hampiasainao izy ireo rehefa mamolavola sy mandefa ilay kapila. Mba hamahana izany dia tsy maintsy nandeha tany amin'ny USB hafa aho izay efa nanana ny MacOS El Capitan, kopia ireo rindranasa ireo amin'ilay singa misy an'i Sierra ary tamin'izay vao nahafantatra ahy (avy manindry ny ALT amin'ny fanombohana) Tsy nohazavainy ny antony hitrangan'izany. Heveriko fa lesoka DiskMaker io. Raha irinao ny fampiharana dia andefaso mailaka aho amin'ny eonyorch@gmail.com
Mamaly an'i Yorch
Javier Alejandro Padilla dia hoy izy:
Azafady. Miezaka mametraka OS X SIERRA amin'ny MAC-nao aho amin'ny alàlan'ny USB… .. Rehefa manandrana mametraka avy amin'ny USB aho dia mihetsika eo ambanin'ny paoma ny bara fa eo afovoany dia mihamangatsiaka ary misy faribolana miloko mivoaka ary avy any tsy mitranga inona no azoko atao? Navelako toy izany nandritra ny andro iray andro ary tsy mandroso aho fa marary amin'ity MAC manafika ity 🙁
Valiny tamin'i Javier Alejandro Padilla
Jose Manuel dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao tamin'ny anjara birikinao. Mikasika ny safidinao manomboka hatrany am-boalohany nefa tsy amboaranao ny kopian'ny Time Machine, ahoana ny hevitrao momba ny fifindra-monina avy amin'ny Mac iray mankany amin'ny iray hafa izay mampiasa ilay fampiharana?
Mamelà ahy hanazava, mametraka Mac vaovao amin'ny 0 ary mifindra monina ny data-nao aorian'ny mac taloha anao avy amin'ny Time Machine.
Valiny tamin'i Jose Manuel
Leatus dia hoy izy:
Tsy azoko atao ny manao ny USB Bootable (efa nanandrana azy tamin'ny 8Gb sy 16Gb aho)
Notsapaiko tamin'ny DiskMaker X 6 ity ary azoko ny lesoka «Ny famafana ny drive '/ Volume / BO16GB' ...» dia tsy mahatakatra ny hafatra «hetsika sysonof» ary avy eo dia tsy mitranga izany.
Notsapaiko ihany koa tamin'ny Disk Creator. Mamela ahy hisafidy ilay singa hiverenana ary koa ny installer, fa raha vao manindry ny bokotra "Mamorona Installer" aho dia mijanona eo. Azoko atao ny mamely ny bokotra in-100 izay tsy manao na inona na inona mihitsy.
Izaho koa dia nanandrana izany tamin'ny Disk Drive. Ny fipihana ny InstallESD.dmg dia avereno ary apetraho amin'ny USB toerana haleha. Milaza amiko izy io fa tokony hizaha ny sary nalaina ary rehefa vita dia hoy izy tamiko hoe "Tsy afaka mizaha ny InstallerESD.dmg (Function not implement)" Na tanteraka ...
Tena kivy aho, misy manana hevitra hafa ve?
Valiny tamin'i Leatus
Vao avy nanandrana izany tamin'ny UNetbootin aho ary tsy…. Manana mania ry zareo sa ahoana?
Fco. Javier dia hoy izy:
Tsara i Jordi, tsy natory nandritra ny 3 andro aho noho ny fiezahana hanavao ny mac mini-ko. Ny zava-misy dia milaza amiko izy fa nohavaozina ary rehefa manandrana manomboka dia natsipy tontolo alina ary ny bara tsy mihoatra ny 2 na 3 mm ary tsy manomboka ... Misy vahaolana mety ve? Manaikitra aho ary manana faribolana maizimaizina tsy hatoriana kely izao!
Salama, manana pro macbook 13-inch aho, tapaky ny taona 2012, nametraka ny sierra aho ary lasa ratsy. Te-hametraka yosemite aho ary amin'ny diskmaker dia miseho »ny famafana ny drive tsy mahatakatra ny hetsika sysonotf» inona no azoko atao?